Krizy fizahan-tany sy fanarenana ny toerana haleha: Boky Vaovao Tsy maintsy Vakiana
Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao momba ny fitsangatsanganana » Krizy fizahan-tany sy fanarenana ny toerana haleha: Boky Vaovao Tsy maintsy Vakiana
Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Hospitality Industry • Vaovao • Tourism • Travel Wire News • malaza ankehitriny
Boky Vaovao Tsy maintsy Vakiana
Mpanoratra David Beirman
Rariny raha havoaka amin'ny Halloween ny boky mitantara ny olana rehetra momba ny krizy sy ny toe-javatra ratsy izay misy fiantraikany amin'ny fizahantany. Na izany aza, rehefa manomboka ny fahasitranana amin'ny COVID-19 ny fizahan-tany, dia mifantoka amin'ireo singa roa amin'ny risika, ny loza ary ny fahafahana izany.
Amin'ny maha mpanoratra an'ity boky ity dia tsy mety amiko ny mitsara ny kalitaon'ity boky ity.
Natokana ho an'ny mpamaky na mpitsikera izany fitsarana izany. Na izany aza, afaka milaza aminao kely aho momba ity boky ity sy ny maha-zava-dehibe azy amin'ny indostrian'ny dia.
Amin'ny ankapobeny, ity boky ity dia fandrakofana lohahevitra momba ireo sokajy manan-danja amin'ny risika sy krizy izay misy fiantraikany amin'ny indostrian'ny fizahantany.
Avy eo aho dia miresaka momba ny paikady ampiasain'ny fikambanana mpitantana ny toerana sy ny orinasam-pizahantany mba hisorohana izany hitranga na hamaliana azy ireo rehefa tonga izy ireo.
Ny sokajy krizy voarakitra ao amin'ny boky dia:
Covid-19 Ny toko lava indrindra amin'ny boky
Tsy fandriam-pahalemana politika
Ny krizy ara-pahasalamana sy ny areti-mifindra, alohan'ny COVID-19
Ny tsy fahombiazan'ny fitantanana sy ny serivisy (tanjona manokana)
Loza sy krizy ara-tontolo iainana
Ny orinasam-pizahantany tsirairay dia afaka mifandray amin'ny iray amin'ireo lohahevitra ireo ary afaka mianatra zavatra betsaka avy amin'ny fomba nandraisan'ireo toerana fizahan-tany sy orinasa ireo fanamby ireo isika.
Ho fanampin'ireo lohahevitra voalaza etsy ambony ireo, ny toko fampidirana roa dia mifantoka amin'ny famaritana ny risika, ny krizy ary ny faharetana ary koa ny governemanta, ny fikambanan'ny fizahan-tany manerantany ary ny sehatry ny fizahantany momba ny risika, ny krizy ary ny fanarenana.
Ny lohahevitra dia aseho amin'ny fandalinana tranga 20 mahery (2-4 isaky ny toko) manerana izao tontolo izao. Satria nanoratra ny boky ho boky fianarana aho dia misy fanontaniana ifanakalozan-kevitra any amin'ny faran'ny toko tsirairay. Na dia natao ho an'ny mpianatry ny anjerimanontolo aza izy io dia nanao izay ho afany aho mba hahazoana antoka fa mora azon'ny mpamaky rehetra ary indrindra ho an'ny matihanina amin'ny fizahantany. Na izany aza, ny famakiana alohan'ny hatoriana dia tsy izany. Niezaka ny haka fomba fijery manerantany aho ary raha azo atao dia ampidiro ny sasany amin'ireo krizy sy fandaharan'asa fanarenana izay nandraisako anjara mivantana.
Ity boky ity no boky voalohany momba ny loza ateraky ny fizahantany, ny krizy ary ny fanarenana hatramin'ny asan'i Joan Henderson tamin'ny 2007, Krizy fizahan-tany, antony, vokany ary fitantanana. Namirapiratra sy nanentana ahy ny bokin'ny Profesora Henderson. Na izany aza, azoko antoka fa hanaiky izy, betsaka ny zava-nitranga teo amin'ny fizahan-tany nanomboka tamin'ny 2007 ary ny COVID-19, izay horesahiko betsaka, no krizy sy fanamby lehibe indrindra, niainan'ireo matihanina sy mpanabe ny fizahantany nandritra ny androm-piainantsika.
Jereo eto ny antsipiriany. Navoakan'ny Sage Publishing (London) ilay boky ary ho hita eran-tany manomboka ny 30 Oktobra (daty famoahana Halloween mety). Manantena aho fa mankafy ilay boky ianao fa aza menatra milaza amiko fa tsy nanao izany ianao ary nahoana. Miasa boky hafa koa aho ka raisina an-tanan-droa foana ny torohevitra manorina.